व्यंग्य | साहित्य संसार
फेरि पनि भर्नाको लफडा आयो
छोरीको दाँत उम्रनु कता हो कता घरमा देउसी भैलो खेल्नेहरुको जस्तै लावालस्कर लाग्न थाल्यो छोरी माग्नेहरुको । उहिलेको बेलामा भए ता बिहेकै लागि केटी माग्नेहरु आएका भन्न सकिन्थ्यो होला तर अहिले यसरी मेरी छोरी माग्न आउनेहरु आफ्नो बालक वा जवान छोराका लागि बुहारी माग्न आएका […]
टाउका भरिका कपालमध्ये पाँचभागको एक भाग बराबरको टुपी थियो मेरो । कालो र बाक्लो कपाल थियो । कपालका अरु विशेषता के थिए खुइलिएको तालु पढेकाले थाहा पाइहाल्छन् । टुपी थियो मात्र । यसलाई धार्मिक विधिले शिखा पार्ने काम भने मैले छाडिसकेको थिएँ, देखावटीका रुपमा मात्र […]
गाउँमा निम्न माध्यामिक विद्यालय थियो । त्यसबेला पढेका मास्टरहरू कमै मात्रामा पाइन्थ्यो । म पनि यसपाली बल्ल कक्षा तीन पास गरेर कक्षा चारमा प्रवेश गरेको थिएँ । खुशी थिएँ अंग्रेजी पढ्न पाइयो भनेर । म अंग्रेजी पढ्न साह्रै उत्सुक थिएँ बल्ल कक्षा चारबाट ए बि […]
‘तँ मरेपछि यमराजले सोझै तँलाई नर्क पठाउँनेछन् र तैंले गरेको पापको वदला लिनेछन् ।’ लामो समयपछि भेट भएको एकजना पूर्वलेखक साथीले मलाई यसरी तर्सायो । आश्चर्य प्रकट गर्दै मैले नर्क जानुपर्ने कारण सोधें । उसले भन्यो- ‘देशका सबै महान् व्यक्तित्वहरूलाई सरापेर जिवीकोपार्जन गर्ने तँ जस्तालाई […]
एकादेशमा एउटा देश थियो रे ! देश भएपछि त्यहाँ नागरिक हुने नै भए। नागरिक भएपछि कसै न कसैले त्यहाँ नेता भएर अवतार लिने नै भए। नेता जन्मेकैले गर्दा त्यहाँका नागरिक जनतामा रूपान्तरति भए रे ! यदि त्यहाँ नेता नभएका भए ती नागरिक नागरिक मात्रै हुन्थे […]
तपाईं पात्रो हेर्नुहुन्छ ? म जस्तो पात्रोको दाइनो र बाइमात्रो बुझ्नुहुन्न की ? खैर, मावलमा हजुरबा/मामाहरुले र घरमा काका र काकाका छोराहरुले पात्रोको पितृ बुझ्ने अनि ब्याख्या गर्ने भएकाले पनि मसँग पात्रोको टाढाटाढासम्मको नाता/सम्बन्ध रहेन । मेरा एकजना दाजुले घरैमा हुने घटना थाहा नपाएकाले छोरो […]
व्यंग्य- जय झापड
स्वम् वा अन्य कसैका गालामा नाडीदेखि मुन्तिर र नङदेखि मास्तिर सुल्टोपट्टिको हत्केलाको भागले कस्सेर बजाउनुलाई झापड भन्दछन् । ‘झापड’ मुक्का, घुस्सा, बक्सिङग, लात्ती आदिको समकक्षी ब्यावहार जनाउने गतिलो शब्द पनि हो । हात छोड्नु, हात चल्नु जस्ता वाक्यहरुले पनि झापडसँग निकटको नाता राख्छन् । चढ्काउनु, […]
दुईवटा अंग्रेजी शब्द ‘कन्ट्र्याक्ट(Contract)’ र ‘किलर(Killer)’ मिलेर बनेको ‘कन्ट्र्याक्ट किलर(Contract Killer)’ शब्दको नेपाली अर्थ के होला ? ‘कन्ट्र्याक्ट(Contract)’ भन्नाले सम्झौता, सन्धी, करार आदि भन्ने बुझिन्छ भने ‘किलर(Killer)’ भन्नाले हत्यारा, मृत्युदाता, काल, यमराज आदि भन्ने बुझिन्छ । दुईवटै शब्द मिलेर बनेको ‘कन्ट्र्याक्ट किलर(Contract Killer)’को एउटै नेपाली […]
प्रिय च्याँखु, माया र सम्झना ! यो रेगिस्तानमा म र मसँगै झण्डै चार लाख नेपाली आरामै छौँ । आशा छ, त्यहाँ पनि तिमीलगायत सम्पूर्ण नेपाली आरामै छौ होला । श्री रेमिट्न्सज्युको खेती गर्ने किसानहरूका कृपाले सवैको कल्याण होस् भनी कामना गर्दछु । तिमीले रेडियोमा सुनेका […]
कहिलेकाहीं बिर्खुरामलाई अनेक सुर चढ्छ । यो चोटी उसलाई झारफूक गर्ने विद्या सिकेर ठूलो धामी झांक्री वन्न रहर लाग्यो । गाउँकै लट्टे धामीसँग शिक्षा लिने विचार गर्यो । लट्टे धामी पनि एकदम प्रख्यात झाँक्री मध्ये पर्थ्यो । हुन पनि हो कोही बिरामी भयो कि रातरात […]
ब्यंग्य~ च्याँखुरीलाई रेगिस्तानी चिठी
प्रिय च्याँखु, माया र सम्झना ! यो रेगिस्तानमा म र मसँगै झण्डै चार लाख नेपाली आरामै छौ । आशा छ, त्यहाँ पनि तिमीलगायत सम्पूर्ण नेपाली आरामै छौ होला । श्री रेमिट्न्सज्युको खेती गर्ने किसानहरुका कृपाले सवैको कल्याण होस् भनी कामना गर्दछु । तिमीले रेडियोमा सुनेका […]
पिज्जा, पाउरोटी र पिँडालु
चर्चित ढुंगेल चर्चित ढुंगेल . पहिले पहिले नेपालीको बर्ग विभाजन उच्च, मध्यम र निन्न भनेर गरिन्थ्यो । ब्यक्तिको आर्थिक हैसियतलाई हेरेर बर्ग निर्धारण गरिन्थ्यो । उच्चमा त्यो पर्थ्यो जसको दरबार हुन्थ्यो । परिवारका सदस्यपिच्छे गाडी हुन्थे । जुँगा स्वदेशी भए पनि लुगा विदेशी हुन्थे । […]
कोरङ्गी प्रेम -संखुवासभा सधैं झैं मेलोमा टाउको जोतिरहेको थिएँ । खल्तीको मोबाईल बुरुक्की बुरुक उफ्रन थाल्यो । बास्न शुरु गरेको भालेलाई कोरली पोथिको बथानबाट मुण्ट्याउँदै लगेर डोको भित्र जाक्दा कस्तरी उफ्रन्छ त्यसै गरी । यो ज्यानलाईनै लडाउँला झैं गरी । तर किन टेर्थ्यो यो ज्यान […]